SAXAAFADII SOOMAALIYEED WAXAY NOQOTAY DANRAACATO!!!
Posted to the Web January 06, 2002
Hayaan Cabdisalaan Ismaaciil Faahiye
Kuliyada siyaadada, Karlstad university, Sweden
Waxaan ahay wiil muwaadin soomaliyeed oo dhalinyarana ah, wadankana kasoo maqan ilaa 10 sano. Sida kaliya ee xaalada wadanka kusuganyahay loola soconkarana ay tahay in wergeysyada ladhagaysto ama la aqristo. Laakin waayadaan danbe waxa soo batay si aad ah wargeysyada soomaaliyeed ee sida qalafsan wararka usoo gudbiya. Waxaa wax laga naxo ah in wargeysyadii ay gabeen dhexdhexaadnimadoodii, weriyeyaashiina badankoodii ay noqdeen kuwo ay ku adeegtaan qabqablayaasha dagaalada iskula jira meel kastaba hajoogaane.
Waxaa intii xukunkii dowladii Siyaad Barre jiray oo kaliya hal idaacad iyo wergeysyo aad u tiro yar, kuwaas oo ku hadli jiray codka iyo siyaasada xukankaas.
Markii dagaalada sokeeye ay dhaceen ka dib waxaa soo baxay
wargeysyo badan oo madax banaan. Nasiibdaro laakiin isla markiiba waxay doorteen badankood inay noqdaan kuwo lagu adeegta amaba ay qiiro qabyaalad ay qaaday.
Dunida xorta ah wargeysyadooda waxa lagu magacaabaa awoodii sedexaa. Taas micnaheedu waxaa weeye in weriyeyaashu leeyihiin awood weyn (ilaahay ayaa awood leh) marka laga reebo baarlamaanka iyo dowlada, awoodaas oo ay ku saameyn karaan bulshada.
Hadaba soo wax laga murugoodo ma aha in marar badan aad kala aqrisato wergeysyada hal dhacdo oo isku mid ah, laakiin lookala fasiraayo si caksi oo aad isaga soo horjeeda?.
Muhiimada ugu weyn ee wargeysyada looga baahanyahay waa inay si dhexdhexaad ah usoo gudbiyaan dhacdooyinka ka dhaca wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba.
Waa in wargeysyadu dhoqdaan ishii sida gaarka u ilaalinaysay dhacdooyinka, xuquuqda bani�aadinimada, nabada, arimaha dhaqaalaha iwm. Cid walba maanta waa lasocotaa xaalada uu wadanka ku suganyahay waxaa markaa looga baahanyahay weriyaasha inay si firfircoon uga qeybqaataan sidii wadanka xaaladiisa loo wanaajin lahaa, sidii wadanka nabad loogu soo dabaali lahaa sidii bulshada soomaaliyeed loo siin lahaa war ku sugan xaqiiqda. Laakiin nasiibdaro waxa maanta meel walba kahelaysaa wargeysyo ha ahaadaan kuwo ka la aqristo iyo kuwo la dhageystaba, kuwaasoo ku hadla afka qabqablayaasha dagaalwadayaasha ah ama qabiilka ay ka yimaadeen. Waxa looga baahanyahay wergeysyada iyo weriyeyaashaba inay ka kormaraan danaha gaar a ah iyo qablaayaladaba.
Waxaa looga baahanyahay inay noqdaan kuwii ka waantoobi lahaa wararka dacaayada ah oo raqiiska oo ay ka baafinayaan wergeysyadooda.
Waxaa dhici karta marar qaarkood in wergeysyada iyo weriyeyaashaba cadaadis badan kaga yimaado qabqablayaasha dagalwadeenada degaanka ay kasoo tebiyaan kataliya ama kunool, laakiin waa markaa marka loo baahanyahay inay ku adkeystaan difaacada xaqiiqda iyo xuquuqda bani�aadamkaba. Waxaan aaminsanahay in xaqiiqdu ugu dabeyntii guuleysan doono Inshaa Allah, dagaalada sokeeyana ay mustaqbalka maruun dhamaan doonaan, laakiin wergeysyada u adeega qabqablayaasha dagaalwadayaasha ama kuhadla magaca qabyaalada waxaa taariikhda u geli doona foolxumada ay kawadaan xaalada siyaasadeed ee ay soomaaliya kusugantahay.
Waxaan oranlahaa wergeysyada iyo weriyeyaashaba soomaaliyeedba ka kaaftooma inaad noqotaan wax maalintii ladoonaba meel loo wato iyo inaad u adeegtaan kaligii taliyaal aan waxaan dantooda ah ka fekerin. Waxaan oran lahaa ookale inay wax bartaan si ay iyaga u dhistaan rayigooda.